Momba anay - Nanchang Hot Fashion Co., Ltd.
Hot Fashion Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2003 dia orinasa isan-karazany izay mampifangaro ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny famokarana amin'ny asa fanondranana sy e-varotra. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny tanànan'i Nanchang, faritanin'i Jiangxi, Sina miaraka amina tranokala misy rohy fitaterana. Izy io dia manana metaly toradroa 8250 metatra toradroa sy mpiasa 300.
Hot Fashion dia malaza amin'ny sehatry ny akanjo fanatanjahan-tena any Shina. Ary ankehitriny ny vokatra vokariny dia nametraka tamim-pahombiazana ny tsena tany Etazonia, Etazonia, Japon, Brezila ary ny Vondrona Eoropeana.
Ny vokatra dia manarona T shirt, polos, akanjo ba misy akanjo lava, basikety sy soccer / soccer. Amin'izao fotoana izao dia manana mpaninjara 60 eran'izao tontolo izao ny Hot Fashion ary amidy amin'ny sehatra an-tserasera na any ivelany na any ivelany ny vokatra.
Hot Fashion dia afaka manome logo sy lamina OEM sy ODM amin'ny fomba samihafa toy ny famindrana hafanana, fanontana amin'ny efijery, fanontana sublimation, amboradara, fanontana 3D ary maro hafa.
Hot Fashion dia manana endrika feno sy Sampana famokarana sy fanontana afaka mahavita santionany ao anatin'ny 5 andro sy famokarana betsaka ao anatin'ny 15 andro.
Hot Fashion dia manana ekipa mpivarotra ambongadiny hikarakara ny mpanjifany.
Ny lamaody mafana dia nahazo ny fitokisan'ny mpanjifany any Eropa, Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Afrika ary Azia noho ny kalitaony, ny fomba ary ny asa-tànany tena tsara.
Eto amin'ny Hot Fashion, izahay, ilay ekipa mafana fo, dia mafana fo amin'ny zavatra ataontsika. Izahay dia maniry fatratra sy manolo-tena hametraka ny dian-tongotra amin'ity vanim-potoana fiantsenana an-tserasera ity ary hahazo fandrakofana an-tsena mihabe manerantany. Fantatsika tsara fa ny làlana hahatratrarana an'io tanjona io dia ny mpanjifa ary ahatontosantsika izany amin'ny vokatra avo lenta sy serivisy ho an'ny mpanjifa mahafinaritra. Raisinay ny teknolojia maoderina, ny fiofanana momba ny mpiasa ary ny fivoriana tsy tapaka miaraka amin'ny mpiara-miasa hafa ao amin'ny indostria ka izahay no lohalaharana hatrany amin'ny fanavaozana ary mitazona ny fahatsapanay ny fomba.